Ungayifumana njani kwakhona iPassword? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyifumana njani kwakhona iphasiwedi ye-LinkedIn?
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 403
Ukuba ufuna ngena kwiakhawunti yakho ye-LinkedIn, kodwa awuyikhumbuli ipaswedi yakho yokungena, kuya kufuneka ukhethe ukuyicwangcisa kwakhona. Ngokubanzi, xa ufaka igama eligqithisiweyo ngokungachanekanga xa ungena kule nethiwekhi, umyalezo othi "Asililo igama eligqithisiweyo elo" uya kuvela kwaye uya kuba nakho ukukhetha ukuwubhala phantsi kwakhona okanye ukuwuseta kwakhona.
Ukulibala iphasiwedi yokungena kwi-LinkedIn kuqhelekile kunokuba ucinga, kungenxa yokuba namhlanje zininzi iinethiwekhi zentlalo kwaye kufuneka ukhumbule negama lokugqitha lokungena. Okulandelayo, zonke iindlela ezikhoyo ziya kwenziwa fumana iphasiwedi ye-LinkedIn.
Izinketho zokufumana kwakhona iphasiwedi yakho ye-LinkedIn
Inethiwekhi yoluntu enobungcali uLinkedIn yenza iindlela ezahlukeneyo zokufumana kwakhona iphasiwedi zifumaneke kubasebenzisi bayo. Ngale ndlela, kuqinisekisiwe ukuba abasebenzisi abangayikhumbuliyo iphasiwedi okanye abangenazo iindlela zokubuyisela kwimeko yesiqhelo banokusebenzisa enye.
Olona khetho lubalulekileyo lokuphinda lisebenzise i-LinkedIn is is nge-imeyile enekhowudi yePIN ukuba ibekwe kwiphepha lokuseta kwakhona. Kwakhona, ukubuyiswa kweakhawunti kuyafumaneka ngokufumana umyalezo obhaliweyo kwinombolo yomnxeba ehambelana neakhawunti eya kufunyanwa kwakhona.
La macandelo alandelayo aya kunika iinkcukacha nganye kwezi ukhetho lokufumana kwakhona iphasiwedi unokuyicwangcisa ngokukhawuleza.
1. Fumana iphasiwedi yakho ye-LinkedIn usebenzisa ifowuni
Xa usenza iprofayile ye-LinkedIn kubaluleke kakhulu cwangcisa inombolo yefowuni yokufumana kwakhona iakhawunti. Ngale ndlela, kunokwenzeka ukuba utshintshe iphasiwedi kwiakhawunti yale nethiwekhi yobuchwephesha kwimeko yokungayikhumbuli.
ukuba fumana iphasiwedi yakho ye-LinkedIn ngokufumana umyalezo obhaliweyo la manyathelo alandelayo kuya kufuneka alandelwe:
Yiya kwiphepha lasekhaya le-LinkedIn.
Cofa kwindawo ethi "Ulibale iphasiwedi yakho" ifunyenwe ngezantsi kweendawo zokungena.
Kwiwindow elandelayo, kuya kufuneka ngenisa inombolo yefowuni ehambelana nayo kwiakhawunti yakho ye-LinkedIn kwaye ucinezele iqhosha u "Setha kwakhona iphasiwedi".
Ke kuya kufuneka ukujonga ukhuseleko olupheleleyo equlathe iphazili ekufuneka yenziwe.
Ngoku, uya kufumana i-SMS kunye PIN khowudi apho kuya kufuneka ukuba ufake i akhawunti akhawunti window.
Ekugqibeleni, faka iphasiwedi yakho entsha kwaye uyiphinde ukuqinisekisa ukuba uyingenisile ngokuchanekileyo.
2. Ukudibanisa iphasiwedi kwakhona nge-imeyile
Ukuthabathasetha iphasiwedi ye-akhawunti yakho ye-LinkedIn ngokufumana i-imeyile Qinisekisa ukuba i-imeyile yakho yokubambisana iyasebenza kwaye unokufikelela kuyo. Emva koko landela la manyathelo alandelayo oza kufumana ngezantsi:
Cinezela ukhetho "Ulibale iphasiwedi yakho".
Ngenisa imeyile oyibhalisileyo kule nethiwekhi yoluntu.
Sombulula ukhuseleko lweCaptcha.
Faka ikhowudi enamanani ama-6 ukuba uya kufumana kwi-imeyile.
Bhala phantsi iphasiwedi entsha uze uyiphinde.
Emva koku, umyalezo uzakuvela kwithebhu ethi "Iphasiwedi itshintshiwe”Kwaye ungangena ukuze ungene kwi-LinkedIn.
1 Izinketho zokufumana kwakhona iphasiwedi yakho ye-LinkedIn
1.1 1. Fumana iphasiwedi yakho ye-LinkedIn usebenzisa ifowuni
1.2 2. Ukudibanisa iphasiwedi kwakhona nge-imeyile
Ungayimisa njani iakhawunti ye-LinkedIn?
Ungayifumana njani imiyalezo ecinyiweyo kuFacebook?